Casuumad loo fidinayo Xisbiga Siidaynta "Ubuntu 13.04" oo ay soo diyaarisay HumanOS | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Noticias, Kuwa kale
Maqaalkani waxaa laga soo qaatay HumanOS ka dib markii ay codsadeen in lagu shaaciyo internetka
Maanta aad baan u faraxsanahay oo maalinta weyni waa soo dhowdahay, oo macnaheedu maahan uun bilow nooca cusub ee Ubuntu, oo kani waa uun cudurdaar waxa runti ay tahay inuu dhaco.
Waqti ka hor waxaan kuu sheegay in HumanOS ay dooneysay inay xitaa wax badan uga furto bulshada, waa hagaag, talaabooyinka ugu horeeya horay ayaa loo qaaday tanna Abriil 26 Markii ugu horreysay, illaa aan ka warhayo mooyee, bulshooyinka dibedda iyo gudaha UCI-da waxay ku biirayaan inay wax la wadaagaan sidii had iyo goorba ahayd inay noqdaan "Beesha Software-ka Bilaashka ah ee Cuba".
1 Maxaa dhici doona maalintaas?
2 Maxaan sameeyaa si aan uga qaybqaato?
Maxaa dhici doona maalintaas?
Munaasabadan iyo sidii loo qabtayba, bulshada ku xeeran aadanaha kulmi doonaa u dabaaldegaan soosaarida nooca cusub ee Ubuntu, markan qiyaastii 13.04, hase yeeshee tani waxay noqon doontaa uun wax ina sugaya.
Joogitaanka koox ka mid ah horumariyeyaasha NOVA si farxad leh samayn doonaa dib-u-soo-saar gaar ah oo loogu talagalay ka-qaybgalayaasha dhacdada oo aan loo baahnayn in la xuso in qof kasta oo raba uu qaadan karo nuqul nidaamka ah, waxaan kaloo rajeyneynaa inaan haysanno nuqul ka mid ah Raspberry Pi laga soo bilaabo gacmaha Eugenio si uu noo tuso qaar ka mid ah awoodaha qalabkan gaarka ah iyo taageerayaashaas Android Laga soo bilaabo Google waxaan rajeyneynaa inaan diyaarino shuruudaha lagama maarmaanka u ah si aad uga heli karto raso wanaagsan codsiyada aad ugu jeceshahay.
Kuwani waa qaar ka mid ah lama filaanka inna sugaya, inta hartay gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa. Intaa waxaa dheer, waxaan rajeyneynaa inaan helno dhammaan fikradaha aad rabto inaad wadaagto si aad uga dhigto maalin lama iloobaan ah.
Maxaan sameeyaa si aan uga qaybqaato?
Sidii hore loogu soo sheegay munaasabaddan, bulshada ka baxsan UCI way ka qayb geli kartaa dhacdada, tan awgeed waa lagama maarmaan in kuwa xiiseynaya ay u soo diraan codsiyadooda boostada ama Osiel, oo qeexaya mawduuca "Codsiga kaqeybqaadashada Xisbiga Siidaynta." inta ay ku jiraan jirka waxay soo sheegi doonaan xogta soo socota:
Lambarka Kaarka Aqoonsiga.
Xarunta ay iska leedahay (Waxbarasho ama Shaqo).
Cinwaanka Emailka (oo lala soo xiriiri karo).
Haddii macluumaad kale ay lagama maarmaan tahay, waxaa looga baahan doonaa emaylladaada.
Codsiyada waxaa la heli doonaa illaa iyo 21-ka Abriil liiska rasmiga ah ee ka-qaybgalayaasha waxaa la daabici doonaa 24-ka bishan.. Looma baahna in la xasuusto in munaasabadda lagu qaban doono Jaamacadda Sayniska Informatics (UCI) iyo in anshaxa ka dhex jira hay'adda uu noqdo mid aan fiicnayn.
Salaan kadib waxaanan rajaynayaa inaan dhowaan idin wada arko !!!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Casuumad loo fidinayo Xisbiga Siidaynta "Ubuntu 13.04" oo ay soo diyaarisay HumanOS
Waxaa jira labo naga mid ah oo doonaya inaan aado ... waxaana sharad ku galay inaysan doonaynin inaan kaligey aado adiguna waad ogtahay - yaa rabi doona inuu ila socdo LOL!
Iyo inkasta oo xaqiiqda qaabka cusub ee Ubuntu aniga waxba igama galin, la wadaagida dadka xiisaha leh ee ka socda UCI (haa, xiiso leh) waa fursad wanaagsan.
Ninka si fiican ma u oggolaan kartaa waad taqaan-yaa guriga dhexdiisa, taas oo sidaan ogahay, aysan ahayn boorsadaada dhabarka u dhiganta had iyo goor. xDD
Ahm ... haa nin haa, way rabi doontaa inay aado markaa waan qaadan doonaa I'll
Kafiican waxaad dhahdaa waxaad rabtaa inaad uqaadato si aad bulshada u tusto inaad tahay Alpha lab, oo aad leedahay saaxiib xDDDD
Halkaas .. Waan ku xasuusinayaa waa in ICU = Haweenka meel kasta oo ay joogaan xDDDD
Miyaadan u maleyneynin in mowduucani uu xoogaa ka yar yahay dulucda weyn?
Cad ^ Koolar dijo
Waan ku biirayaa…
Jawaab Cad ^ Koolar
Halkan Montevideo, waxa caan ka noqon doona waa UbuConLA bisha Juun.
Hagaag, waan tagayaa oo hadii ay rabaan inay gurigayga igaga tagaan waan cararayaa oo KELIGAA AYA .. jum ...
Waxwalba waan aqrinayaa, okay… iyo KZKG, Elav kuuma caawinayo… ..
xDDDD Laakiin waa maxay tani? Basaasaya <° Linux? xDDDD
grrrr… tani si fiican ku dhamaan mayso …….
elav for now .. Waan murugooday oo waxaan doonayaa inaan naftayda dilo ……… bazinga
Waayahay, uguyaraan waan ognahay taas waad taqaan-yaa durba wuxuu leeyahay niik
JA. JA. HA
Maxaa jira, ma waxaad iila tahay doqon?
Aniga oo amaanay maqaalkiina oo aad i siineysaan… .. Waxaan shaaca ka qaaday in aan ahay taageerayaal barta sidaasna aad ii siisaan, jum
xD ... waa maxay sheeko qurux badan oo ay keenaan xD ...
Ilaaheey .. waxaan u maleynayaa in Cadaan ^ Koolar tan ku khalday chat
Raaxo ... laakiin way xanuunsan tahay inay halkaas u tagaan oo kaliya Cuba!
Ku raaxayso 😉
hmm xiiso leh suurtagalnimada in wiilasha ICU bixiyaan U. Hadda wuxuu u diray emaylka xogta hehe ... Waan arki doonaa sida ay u muuqato !! ...
Dhinashada: Rakibaadda, qaabeynta iyo dulmar guud